Izvi ndizvo zvese zvatinofunga isu tinoziva nezve iOS 16 kusvika nhasi | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 12/04/2022 18:00 | iOS 16
Apple yakavhura kurambidzwa kwerunyerekupe nezve masisitimu ayo matsva panguva yakasimbisa WWDC22 yayo. iOS 16, watchOS 9 kana iPadOS 16 ndedzimwe masisitimu anonyanya kutarisirwa nevashandisi vanozotanga kuyedza vanogadzira mubeta modhi muna Chikumi. Kune runyerekupe rwakawanda pamusoro pavo uye izvi zvichangotanga. Ndosaka taunganidza zvese zvatinofunga isu tinoziva nezve iOS 16, iyo inotevera inoshanda sisitimu yeiyo iPhone uye iPod Touch, iyo ichaunzwa muna Chikumi 6 naTim Cook nechikwata chake pakuvhura keynote yeWWDC22.
iOS 16: chirongwa chakamirirwa kwenguva refu nekuda kweiyo huru isingazivikanwe
WWDC22 ichaitika murunhare kubva musi wa6 Chikumi kusvika 10, 2022. Mumusangano uyu, hukuru hutsva padanho resoftware pamberi pezviuru zvevagadziri. Maminitsi mushure mekuratidzwa kwepamutemo kwechiitiko uye masystem matsva ekushanda, mabeta ekutanga evagadziri anoburitswa. Masvondo gare gare, mabheta eruzhinji anosvika kune vashandisi vanosaina kuruzhinji beta chirongwa.
heyi zvakawanda zvisingazivikanwe kumashure kweIOS 16 iyo ichagadziriswa munaJune 6. Nekudaro, runyerekupe rwuri kutiudza kwakananga sisitimu yekushandisa uye zvitsva zvayo zvikuru. Imwe yeaya asingazivikanwe ndeye iOS 16 inoenderana. Ndokunge, ndeapi maPhones anozoenderana neiyo update uye ndeapi anozosiiwa kunze kwekutenderera kutenderera. Makuhwa anoratidza izvozvo iPhone 6S, 6S Plus uye SE 1st chizvarwa inogona kusiiwa kunze kweiyo update mushure memakore matanhatu akateedzana ekuvandudza.
WWDC 22 ichaitika kubva Chikumi 6 kusvika 10 mune telematic fomati
Padanho rekugadzira, shanduko huru seyatakaona ine iOS 7 haitarisirwe. Gurman anotsinhira pane izvi mutsamba yake yevhiki nevhiki pa Bloomberg iyo inovimbisa kuti iOS 16 ichava neshanduko huru dzakabatana nayo zviziviso uye hutano zvikamu chaizvo mutsinga yewatchOS 9 uye ramangwana Apple Watch Series 8.
Pfungwa inotevera ndeye nhau dzine chekuita nekushanda mukati meIOS 16. Pakave nefungidziro dzakawanda dzekuti kosi huru yaigona kuuya nayo notification management. Apple yanga ichiita shanduko kune yekuzivisa sisitimu kwemakore, asi zvinoita sekunge haina kugutsikana zvachose nemhedzisiro. Zviri pachena kuti tichaona shanduko muzviziviso.
Zvakare, sezvatataura, pachava nenhau muchikamu cheHutano uye zvigadziko zve rOS, iyo inoshanda sisitimu inotakura magirazi echokwadi emangwana kubva kuApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 16 » Izvi ndizvo zvese zvatinofunga isu tinoziva nezve iOS 16 kusvika zvino
Google Mepu inogadzirira kuwedzera mitengo yekubhadharisa uye majeti matsva